1. ဆန်စက်ကိုချောချောမွေ့မွေ့မတပ်ဆင်မီနှင့်ဆက်နွယ်သောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးပုံမှန်ရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးပါ, ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေပြီးဂီယာခါးပတ်လည်းကောင်းတယ်. အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ချောဆီအရည်ကြည်အခြေအနေကိုအာရုံစိုက်ပါ. အထက်ပါအစိတ်အပိုင်းများပုံမှန်ဖြစ်ပြီးနောက်မှသာသင်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုစတင်လည်ပတ်နိုင်သည်.
2. အညိုရောင်ဆန်၌အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားပါ, ထိုကဲ့သို့သောကျောက်စုစုပေါင်းနှင့်သံအဖြစ်. ကျောက်တုံးကြီးတွေ၊ သံတွေမကြီးသင့်ဘူး , စပါးစက်ကိုမထိခိုက်စေဖို့. ဆန်စိုထိုင်းဆလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးပါ.
အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုသောအရေးကြီးသောအရာအချို့လည်းရှိသည်. သငျသညျဆန်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ demount တဲ့အခါ, စက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အောက်ပါအချက်များကိုသင်သတိပြုသင့်သည်.
1. သင့်လျော်သောအစီအစဉ်ဖြင့်ဆန်ကြိတ်စက်ကိုငွေထုတ်ပါ. ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှအဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပြင်ဘက်မှအတွင်းပိုင်းများဖြစ်သည်.
5. တပ်ဆင်ရန်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ပါ, ထို့ကြောင့်တပ်ဆင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မှန်ကန်မှုကိုတိုးမြှင့်. demounting စဉ်အတွင်းစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှတ်သားပါ.
6. စက်အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုအကြီးအကျယ်ခေါက်ခြင်းမရှိဘဲဖြိုချရန်သင့်တော်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါ .
ဆန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အဓိကအစားအစာဖြစ်သည်. ဆန်သမိုင်းသည်ကမ္ဘာ့လူသားများဖြစ်သလောက်နီးပါးကြာသည်. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆန်စျေးကွက်ကအရမ်းတိုးတက်နေပြီ. စပါးမှဆန်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း? ဟုတ်ပါတယ်ဆန်စက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. သို့သော်, သင်ဖောက်သည်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပါစေဘယ်တော့မှမ, ဆန်စက်၏အခြေခံဗဟုသုတနှင့်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်များကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။.
ဆန်စက်စက်၏အပိုပစ္စည်းများတွင်ဆန် huller မျက်နှာပြင်ပါဝင်သည်, အဆိုပါ huller ဓါး, နှင့် Whitening ဆလင်ဒါ. ဤအပိုင်းများနှင့်စပါးအကြားဖြစ်ပေါ်သောမကြာခဏပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်, များစွာသောအပိုပစ္စည်းများကိုအချို့သောဒီဂရီအလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်. အလွန်အကျွံ wear နှင့်အတူ, ဆန်ဖြူ၏အထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသိသိသာသာကျဆင်းလိမ့်မည်. ဒီအချိန်မှာ, သငျသညျအပိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်. အပိုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အတွက်အသုံးပြုသူလက်စွဲကိုဖတ်ရှုပါ.
အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အကြီးစားဆန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အကြီးစားဆန်စက်များလိုအပ်သည်. သူတို့ကလုပ်နိုင်တယ် 10-100 တစ်နေ့လျှင်တန်ချိန်. အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံသေးငယ်သည်ဆိုပါက, ထို့နောက်အလတ်စား, အသေးစားဆန်စက်များသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသောဆန်စက်များသင့်တော်လိမ့်မည် . ၎င်းတို့သည်တန်ချိန်များစွာလှည့်ပတ်နိုင်သည်. ၎င်းသည်မိသားစုသို့မဟုတ်ရွေ့ပြောင်းနိုင်သောလမ်းရောင်းသူအတွက်ပါ, ထို့နောက်အသေးစားသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောဆန်ကြိတ်စက်များသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.